वैकल्पिक धार निर्माण गर्न एकीकरण जरुरी
As of Sat, 08 Aug, 2020 14:30
६ पार्टीको एकीकरणबाट बनेको चुनावबाट तेस्रो ठूलो दल बनेको, महाधिवेशनबाट संरचनात्मक ढाँचामा आइनसकेको र पार्टीको स्वरूप ग्रहण नगरेकै अवस्थामा एकपटक फेरि एकीकरणको माध्यमबाट राजपा अर्को राजनीतिक शक्ति बन्ने प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ । त्यसैले महाधिवेशनका गतिविधि सुस्त छन् । अध्यक्ष–मण्डलीय प्रणालीमा रहेको राजपाका नेताहरूले सम्मान र समानता आधारमा एकीकरण हुनुपर्ने माग अगाडि बढाइरहेका छन् । राजपा आफैं पनि आन्तरिक विवादबाट मुक्त हुन सकेको छैन । विशेष गरी गत वर्ष अध्यक्ष–मण्डलमा संयोजकको चक्रीय प्रणाली अपनाएदेखि विवाद चर्किएको हो । पार्टी गठन भएदेखिको संयोजक पार्टीले निर्वाचन जितेपछिसम्म लगातार संयोजक भइआएको अवस्थामा सो पदबाट हटाएर चक्रीय प्रणाली अपनाउनु उचित नभएकाले पार्टीका कतिपय नेताले यसको समीक्षा हुनुपर्ने माग राखेकै छन् । राजपा विवादका लागि ठाकुरको संयोजकत्वमा महाधिवेशन मूल तयारी समिति बनाउनुपर्ने माग पूरा गरिए पनि त्यो समितिलाई पूर्णता दिने विषयका काम नभएको पार्टी नेताहरूको भनाइ रहे पनि पार्टीको अध्यक्ष–मण्डलका नेताहरू यस्तो विवाद नभएको बताउँछन् । अध्यक्ष–मण्डलका नेताहरूबीच सहमति भएलगत्तै महाधिवेशनका सबै काम टुंगिने विश्वास नेताहरूको छ । यसै सन्दर्भमा राजपाका अध्यक्ष–मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवसँग पार्टी कास्मिरको विशेष दर्जा खोजिएको विषय, प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन, एकीकरण र महाधिवेशनका अतिरिक्त समसामयिक राजनीतिसँग जोडिएर कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले गरेको कुराकानीको सार :
भारतले काश्मिरलाई दिइआएको विशेष दर्जा हटाएको विषयमा तपाईंको र राष्ट्रिय जनता पार्टीको धारणा के छ ?
भारतले जम्मु काश्मिरलाई विशेष किसिमको दर्जा दिएको थियो । त्यो व्यवस्था संविधानमा गरेर दिएको थियो । तत्कालीन समयमा भारतले त्यो विशेष दर्जा दिन आवश्यक महसुस गरेको थियो होला । अहिले भारत सरकारले त्यो महसुस गरेन अनि संविधानमै भएको व्यवस्था परिवर्तन ग-यो । यो विषय नितान्त रूपले भारतको आन्तरिक मामिला हो । किनभने यो व्यवस्था संविधानमा भएको थियो र संविधानलाई संशोधन गर्ने अधिकार भारतको नैसर्गिक र अन्तरिक अधिकार भएको हो । अब कानुनी वा संवैधानिक पाटोबाट हेर्दा पनि त्यहाँका तल्लो सदन लोकसभा र माथिल्लो सदन राज्यसभा दुइटैबाट पास गराएर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति लिएको स्थिति छ । त्यसैले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको अवस्था छ । अर्को भारतको छिमेकी मात्रै नभएर मित्रराष्ट्र भएको नाताले पनि भारत सरकारको अडान (स्ट्यान्ड) हुनुपर्छ । जहाँ राष्ट्रिय जनता पार्टीको कुरो छ, यो भारतको आन्तरिक मामिला हो, यसमा हामीले धेरै कुर्लिरहनु आवश्यक छैन् । त्यसैले राजपा भारत सरकारको निर्णयसँगै रहेको विषय राख्न चाहन्छु ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धहरूलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न गठित प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनलाई भारत सरकारले बुझ्न नमानेको अवस्था छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ र पार्टीले कसरी लिएको ?
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई समकालीन अवस्थामा परिभाषित गरी सिफारिस गर्न प्रबुद्ध समूह गठन गरिएको थियो । प्रबुद्ध समूहको गठन प्रक्रियामा सुरुदेखि नै राष्ट्रिय जनता पार्टीका असहमति रहेको थियो र छ । नेपाल र भारतको सम्बन्धको कुरा गर्दा हामी सीमासँग जोडिएर रहेको क्षेत्र मधेसको भूभागमा बस्ने मधेसीहरू र भारतको सीमासँग जोडिएकाहरूबीच एक विषेश प्रकारको अन्तरसम्बन्ध रहिआएको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा प्रबुद्ध समूहमा नेपालका तर्फबाट जसरी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने थियो त्यसरी गराइएन, त्यसैले यसको गठनमै सन्तुलन भएन भन्ने हाम्रो असहमति थियो । यो आफैंमा एक संवेदनशील विषय हो । अर्कातर्फ सीमासँग जोडिएर रहेकाहरूले भोगेका पीडालाई अनुभव र बोध गर्ने व्यक्ति हामीहरूभन्दा अन्य कोही होला जस्तो हामीलाई लाग्दैन । त्यसैले अहिले प्रबुद्ध समूहले तयार पारिएको प्रतिवेदन एकलौटी समूहको वर्चस्वमा तयार भएको प्रतिवेदन हो । यसले समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्थाका आधारमा बनेको नेपाको सिंगो प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । भारत सरकारले यो प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको हो भने त्यो ठीक हो । यो प्रतिवेदन बुझ्नु हुँदैन । राष्ट्रिय जनता पार्टीको सुरुदेखिको अडान हो ।
किन बुझ्नु हुँदैन ?
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका बारेमा मधेसका सरोकारवालाहरूसँगको सहमतिबिना गर्न खोजिने पुनरावलोकन अपुरो हुन्छ । त्यसैले पहिले यसको गठन प्रक्रिया सच्याउनुपर्छ । फेरि प्रबुद्ध समूहको गठन गर्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रा तर्फबाट व्यक्ति समावेश गर्नुपर्छ र त्यसपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । यो प्रतिवेदन बुझेन भन्नुको कुनै अर्थ छैन । यस्तो प्रतिवेदन बुझ्न हुँदैन । यो प्रतिवेदन धरातलीय यथार्थलाई बोध गरेको होला भन्न सकिने अवस्था छैन् । यो प्रतिवेदनबाट प्राप्त गर्न खोजिएको परिणाम प्राप्त गर्न सकिँदैन । यसको विश्वसनीयतामै संकट हुन्छ । यसको बुझाइको गहिराइमा संकट हुन्छ । त्यसैले यसको पुनर्गठन गरी बढ्दा मात्रै हामीले खोजेको परिणाम प्राप्त गर्न सक्छौं । यस्तो हुँदैन भने हामी मान्दैनौं । मान्न सक्दैनांै भन्ने हाम्रो पार्टीको क्लियरकट स्ट्यान्ड हो ।
बाहिरै बसेर यो प्रतिवेदनबारे केही बुझेर यस्तो भन्नुभएको हो कि ?
होइन । हामीलाई यो प्रतिवेदनका बारेमा केही थाहा छैन । मूलतः यो प्रक्रिया नै असन्तुलित र अमान्य भएकाले हामीले यसलाई नमानेका हो ।
काश्मिरको सन्दर्भमा संशोधन गर्दा भारतले काश्मिरमा सञ्चार र सामाजिक सञ्जालको क्षेत्रमा बन्देज लगाई त्यहाँका नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेर गरेको देखियो नि यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेसको स्वतन्त्रता, मानवअधिकारजस्ता विषय वैश्विक विषयहरू हुन् । मलाई लाग्छ, यी विषयहरू त्यहाँको सुरक्षासँग जोडिएकाले यसो गरिएको हुन सक्छ । यो तत्कालका लागि गरिएको विषय हुन सक्छ । हामीले पाएको जानकारीअनुसार त्यहाँ सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा लगाइएका बन्देजहरू खुकुलो हुँदै गएका छन् । मानवअधिकारका विषय संवेदनशील विषय हुन् । यसमा सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुल गरेका छौं ।
तपाईंहरूले उहिले उठाएको संविधान संशोधनको विषयलाई सरकारले अहिले कसरी लिइरहेको छ ?
यो संविधान अधुरो हो, अपुरो हो । संविधान बनिरहेको बखतदेखि नै हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्ड हो । संविधान संशोधनको विषयमा सरकार जसरी गम्भीर बन्नुपर्ने थियो त्यसरी बनेको देखिएन । राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारसँग संविधान संशोधन र आन्दोलनको समयमा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दाका बारेमा, त्यसबेला जेलमा परेका हाम्रा साथीहरूको रिहाइका बारेमा, त्यतिबेला भएको धनजनको क्षतिका बारेमा र सामेलीको राजनीति वा भनौं मधेसीको प्रतिनिधित्वलाई वा जनताको जनसंख्याका आधारमा कसरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयहरूमा हामी एकपटक औपचारिक कुराकानी गर्नेछौं । यी विषयहरूमा सरकार उदासीन भएको हामीलाई लागेको छ ।
समाजवादी पार्टीसँगको एकताका विषयहरू सार्वजनिक भएका छन् । कहाँसम्म पुगेको छ एकता प्रक्रिया ?
समाजवादी पार्टीसँगको एकीकरणको विषयमा मिडियामा जसरी हल्ला पिटिएको छ त्यो हामीलाई बदनाम गराउने हिसाबले पनि भएजस्तो लाग्छ । विषयवस्तुलाई विषयान्तर गर्नका लागि आआफ्नै ढंगले आधार र तथ्य बिना नै धेरै कुरो आएको छ । सत्य के हो भने ६ विभिन्न पार्टी मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी हो । त्यसैले राष्ट्रिय जनता पार्टीले यो देशमा मधेसलगायत मूलधारबाट अलगथलग परेका वा पारिएका विभिन्न समुदायहरूलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि, सामाजिक न्याय व्यवस्थामा आधारित राज्य निर्माण गर्नका लागि, विभिन्न किसिमका भेदहरूलाई निर्मूलीकरण गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न एउटा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेर हामीले सिद्धान्त र विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग एकीकरण गर्ने कुरा निर्णय ग-यौं । त्यहीअनुरूप समाजवादी पार्टीसँग कुराकानी भइरहेको स्थिति छ । तर, बाहिर हल्ला भएजस्तै कुनै ठोस रूपमा पुगेको स्थिति छैन । यो दुई पार्टीबीचको एकीकरण भनेको एक पार्टी अर्को पार्टीमा विलय हुनु होइन । न त राजपा समाजवादी पार्टीमा गएर विलय हुन्छ, न समाजवादी पार्टी राजपामा विलय हुन आउँछ । दुवै पार्टीको राजनीतिक शक्ति समान छ । त्यसैले हामी सम्मान र समानताका आधारमा एकीकरण हुनुपर्छ भनेर जोड दिन चाहन्छौं । यी दुई शक्ति मिलेर एउटा बलियो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न एकीकरण हुनुपर्छ । एकीकरणका बारेमा पार्टीको यो क्लियर लाइन हो ।
त्यसो भए भएका अनौपचारिक वार्तामा के भएको छ त ?
दुवै पार्टीका वार्ता समितिका सदस्यहरूले एक–अर्कासँग र एकअर्काका पार्टी नेताहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेका छन् । त्यसैले कुनै ठोस रूपमा पुगेको स्थिति छैन । पार्टीलाई भएको जानकारी यति हो । दुवै पक्षले दुवै पार्टीबीच कसरी सम्मान र समानताका आधारमा एकीकरण गर्न सकिन्छ, त्यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । एकीकरणका बारेमा बाहिर आफ्नै प्रकारका अनर्गल विषयहरू सार्वजनिक भएका छन् । मलाई लाग्छ, हल्लाको पछाडि लाग्नु हुँदैन ।
भदौ मसान्तसम्म एकीकरण भइछाड्छ भन्ने बुझाइ पनि छ नि, यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
समयसँग हामीलाई कुनै सरोकार भएन । यी विषयहरूलाई सम्बोधन गरी एकीकरण भयो भने त राम्रै हो । यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने कुनै कारण छैन । सम्मान र समानताका आधारमा दुई पार्टीको एकीकरण हुन्छ, तर हामीले खोजेको आवश्यक बलियो वैकल्पिक शक्ति बन्ने ग्यारन्टी गर्ने आधार तयार नभएसम्म यो विषय हल्लामात्र हुनेछ ।
त्यो भनेको के हो, अझ प्रस्ट पार्न मिल्छ कि ?
छलफल चलिरहेको छ । अहिले नै तपसिलका विषयमा कुरा गर्नु त्यति जायज हुँदैन । जुन साथीहरूलाई जिम्मा दिएका छौं उहाँहरूले कुरा गरिरहनुभएको छ । उहाँहरू एक–आपसमा निष्कर्षमा पुगेपछि हामीलाई पार्टीमा जानकारी दिनुहुनेछ, त्यसपछि हामीले निर्णयमा पुग्छौं ।
तपाईं आफैं पनि समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँगको कुराकानीमा हुनुहुन्छ । कुराकानीबाट के पाउनुभएको छ ?
दुवै पार्टीका नेताहरूमा एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ छ । दुवैतर्फ एकीकरणका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण भएको छ । कसरी गर्ने ? केका आधारमा गर्ने ? विषयहरूलाई कसरी मिलान गर्ने ? त्यो गर्न बाँकी छ ।
तपाईंहरूले सांसदको संख्या बढाउनैका लागि मात्र एकीकरण गर्न लाग्नुभएको हो भन्ने भनाइ पनि छ नि ?
वैकल्पिक धार निर्माण गर्नका लागि एकीकरण गर्ने हो, त्योभन्दा अन्यथा होइन । हामीले संसद्मा केही सिट बढ्ला भनेर एकीकरण गर्न खोजेका होइनौं । एकीकरणको यो अर्थ लाग्दैन । भोलिको दिनमा राजनीतिक डिस्कोर्सलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनका लागि एकीकरण गर्न खोजिएको हो । मुलुकमा जुन प्रकारको अन्योल, सामाजिक विभे तथा, जुन प्रकारको आर्थिक–समाजिक विकृति देखा परेको छ, ती तमाम विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि एउटा बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न यो एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको पार्टीसँग एकीकरण गर्नु हुन्न भन्ने विचार तपाईंको पार्टीमा रहेको विषयलाई एकीकरणसँग जोडेर कसरी लिनुभएको छ ?
भट्टराईजीको पार्टी नयाँ शक्ति संघीय समाजवादी फोरमसँग मिलेर समाजवादी पार्टी बनेको हो । हिजो विभिन्न वैचारिक मतभेद थियो । अहिले पनि छ होला । ती सबै अलग–अलग भएका विचारलाई मिलाएर एक विचारको निर्माण गर्न यो एकीकरण गर्न गइरहेका छौं । ठूलो उद्देश्य पूरा गर्न साना–साना असन्तुष्टिहरूलाई पन्छाउनुपर्छ । यस्ता विषयलाई पन्छाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको हो । यो ट्याक्टी मूभ नभएर स्ट्रेटेजिक प्लानअन्तर्गत हुनुपर्छ हाम्रो बुझाइ छ ।
त्यसो भए राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरूको ठीक ढंगले समायोजना होस् भन्न खोज्नुको हो ?
नेता होइन । समग्रमा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि चाहिने आवश्यक शक्ति निर्माणको पूर्वसर्त हो यो एकीकरण ।
समाजवादी पार्टीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मान्यता बोकेको छ, राजपा संसद्बाट चुनिएको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मान्यता बोकेको पार्टी हो । यस्ता राजनीतिक विषयमा पार्टीमा निर्णय भइसकेको हो र ?
मैले पहिले भनें नि, समाजवादी पार्टी राजपामा विलय हुँदैन, न त राजपा समाजवादी पार्टीमा विलय हुँदैन । यी तमाम राजनीतिक वैचारिक कुरा छन् । राज्यको संरचनासँग जोडिएका विषय हुन् । राज्यको शासन प्रणाली कस्तो हुने ? यस्ता विषय छलफल र बहसबाट निक्र्योल हुन्छ । यो विषय पनि वार्ता समितिले छलफलमा समावेश गरेको छ । तर, यस्ता विषयहरूमा मिलिसकेको स्थिति छैन । यस्ता विषयको तपसिलमा जाने अवस्था अहिले छैन । नीतिगत रूपमा एकता गर्ने निर्णय भएको हो । त्यसलाई मूर्तरूप दिन साथीहरू लागिपर्नुभएको हो ।
राजपा वा समाजवादी पार्टीले एकीकरणका लागि एक–अर्कालाई कुनै खाका आदानप्रदान गरी छलफल अगाडि बढाइरहेको छ ?
कुनै खाका आएको पनि छैन र हामीले पठाएको पनि छैनौं ।
तपाईंको पार्टी अहिले पार्टी एकीकरण र महाधिवेशन दुवैतर्फ डोरिएको अवस्थामा छ, हैन र ?
दुई छुट्टाछुट्टै विषय हुन् । दुवै राजनीतिक शक्तिको एकता राष्ट्रिय आवश्यकता हो । त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थापन गर्न हिजोका दिनमा ६ पार्टी एक भएका हौं । ती पार्टीका नेताहरूको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि पार्टीलाई गतिशील बनाउनका लागि, पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनका लागि गरिने कार्य भनेको महाधिवेशन हो । त्यसैले यो अर्कासँग जोडिएको विषय होइन् ।
कात्तिक मसान्तसम्म महाधिवेशनका लागि अझ पनि तपाईंका पार्टीमा कतिपय प्रावधान पूरा गर्र्न बाँकी छन् । महाधिवेशनका लागि ती प्रवधान पूरा भइसकेका छन् त ?
राजपाको यो नितान्त आन्तरिक कार्यभार हो । हामीबीच सहमति बनिसकेपछि गर्न सकिने कार्य हो । यसका लागि कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन । पार्टीभित्र यो वातावरण बनाउन हामी तयार छौं । वातावरण बन्छ । हामीले महाधिवेशनका बारेमा एउटा मोडलमा सहमति गर्ने बित्तिकै सबै समाधान भइहाल्छ । हामी नेतृत्वतहमा कुन कार्य, कतिखेर कसरी गर्ने विषयमा सहमति भए महाधिवेशनको कुरो ठूलो विषय होइन । राजनीतिक पार्टीमा महाधिवेशनको विषय ठूलो कुरो हुँदैन । जिल्ला अधिवेशन भइसकेपछि महाधिवेशन लाग्यो भन्ने हुन्छ । त्यो भएन भने त्यसलाई पूरा गर्न समय बढाउन सकिन्छ । प्रक्रियामा छिर्नेबित्तिकै अटोमेटिक सञ्चालन हुन्छ । हामीबीच साझा निष्कर्ष बन्छ, त्यसपछि अगाडि बढ्छ । महाधिवेशनका कार्यहरू भइरहेका छन् ।
एकीकरण भएपछि महाधिवेशन हुँदैन, हैन र ?
महाधिवेशन र एकीकरणको विषय छुट्टाछुट्टै विषय हो । महाधिवेशनअघि एकीकरण भए त झन् राम्रो । भएन भने त्यसपछि गरौंला । एकले अर्कोलाई रोक्ने विषय भएन ।
सरकारले जनताका लागि विकासका समृद्धिको क्षेत्रमा गरेको विषयबारे केही बताउनुहुन्छ ?
यो सरकार बन्दै गर्दा जनतामा ठूलो आशा र सपना थियो । यो सरकारले राष्ट्रिय जनजीवनका लागि एउटा बलियो आधार तयार गर्छ भन्ने थियो । समग्रमा भन्दा यो सरकारले जनताको आशा र सपनाअनुरूप अगाडि बढ्न सकेन । विकासको सवालमा होस् वा सुशासनको सवालमा होस्, चाहे शान्ति–सुरक्षाको सवालमा होस्, चाहे भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा होस्, चाहे जनजीविकाको सवालमा होस्, यो सरकारले जनचाहनाअनुरूप काम गरेन । सत्ताधारी पार्टीभित्र विभिन्न प्रकारका समस्या रहेको देखिन्छ । सरकारी संयन्त्र जसरी परिचालन गर्नुपर्ने थियो, त्यसरी परिचालन भएको देखिएन । हाम्रो विषयको कुरा गर्नुहुन्छ भने संविधान संशोधनको विषयदेखि लिएर प्रतिनिधित्वको सवाल ज्यूँका त्यूँ नै छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा सरकार सबै मोर्चामा कमजोर सावित भएको छ ।
तपाईंलाई भन्न मन लागेको बाँकी केही भए भन्नुस् न ?
हाम्रो पार्टी बारेमा अनर्गल प्रचारहरू भइरहेका छन् । हाम्रो पार्टीलाई विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग जोडेर सत्यतथ्य नभएका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । राजपाले देश र जनताका लागि गर्नुपर्ने कार्य हामी आफैँ गर्छौं, कुनै शक्तिकेन्द्रले अ-हाएर गर्दैनौ । हामीमाथि कुनै दबाब छैन, न त कुनै शक्तिकेन्द्रले केही भनेको छ भन्ने कुरो तपाईंको लोकप्रिय दैनिकमार्फत स्पष्ट पार्न चाहन्छु । देश विकासका लागि हामी सबै आआफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकताबोध सबैमा होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।